naharitra roa andro tao Paris i Madagasikara. Tanjona ny hanovana ny endrik’i Madagasikara eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena noho ny laza ratsin’ny kolikoly. Eo ihany koa ny fizorana amin’ny fangaraharan’ny fitantanana ny harena ankibon’ny tany Malagasy manoloana izao fihaonan’ny ITIE izao. Nanararaotra nanao ny tatitra nandritra ny enim-bolana eo amin’ny sehatra harena ankibon’ny tany tamin’ny filohan’ny ITIE ny minisitry ny harena ankibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika Fidiniavo Ravokatra. Tsiahivina fa ny ITIE dia fikambanana manerana izao tontolo izao manara-maso sy mametraka ny fenitra iraisam-pirenena amin’ny fitrandrahana sy fitantanana ny harena ankibon’ny tany amin’ny fomba mangarahara ary nanala ny sazy nihatra tamin’i Madagasikara tamin’ity taona ity. Amin’izao moa dia nampidirina amin’ireo sehatra iompanan’ny kitapom-bolam-panjakana amin’ny alalan’ny lalàna mifehy ny tetibola nasiam-panitsiana mihitsy ny fitantanana ny harena ankibon’ny tany teto Madagasikara. Nanomboka ny 18 ka hatramin’ny 19 jona lasa teo ny fikaonan-doha ka nibahan-toerana tao ny fifanakalozana sy ireo paik’ady maharitra ny amin’ny fitantanana ny harena ankibon’ny tany. Nihaona nivantana tamin’ny filohan’ny ITIE Fredrik Reinfeldt tao Parisy ny minisitry ny angovo ary nanaiky fa hanao tatitra isan-taona ny amin’ny fitrandrahana ary amin’ny endriny mangarahara sy mifanakara amin’ny fepetran’ny ITIE atao eto Madagasikara.